Lookout ụlọ elu Kozákov
Kozákov (744 m) bụ ugwu ndị kasị elu kozákovský riiji na Bohemian Paradise. Hill e chọọ ebe ọ bụ na prehistoric ugboro ka ego nke dị oké ọnụ ahịa na nkume, nke prehistoric dinta na-emepụta dị mfe ngwaọrụ. Na cavities nke nkume crystallized * Tụkwasị dịanyā agate, jasper, amethyst, crystal, anwụrụ quartz na ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa na nkume.
The obodo saịtị e ji mee ihe na Middle Ages ka icho mma n'ụlọ nsọ. Kozákov bụkwa ebe a na-ewu ewu maka paragliding. Akụkụ kasị ukwuu nke mpaghara Kozákov bụ site na nkume nkume dị iche iche, nke na-ekpuchi isi na basalt na sediments n'elu, n'ebe ugwu na n'ebe ọwụwa anyanwụ. Tupu 6 gaa na 4 maka ọtụtụ nde afọ, Kozakov bụ ọkụ ọkụ ọkụ.
Akụkụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Kozákov bụ nke a na-ejikarị osisi sandstones Upper Cretaceous Cenomanian. A na-agbaji ndị a n'ime kerti ole na ole na Tertiary ma weta ha n'ụdị ha ugbu a.
N’oge na-adịghị anya, ọkụ na-ere Kozák. Ka oge na-aga, ọtụtụ puku ndị agha na-ezukọ ebe a. Na 1901, onye na-ese ihe nkiri Turnov Jan Prousek tụrụ aro ka a rụọ oflọ ụka Neo-Romanesque nke St. Cyril na Methodius ma ọ bụ karịa ihe dị ka 20 mita dị elu Slavic gbara mkpịsị ọgba ogbi kụrụ osisi dị obere dị okirikiri. Mgbe e guzobere Czechoslovakia, 28 gbara ọkụ ebe a kwa afọ. Ọktoba. Mgbe ọnwụ František Ladislav Rieger nke 1903 nke afọ, e mepụtara echiche ahụ iji sọpụrụ ebe nchekwa ya site na iji Rieger Mound. Mgbe otu afọ gachara, “Rieger Cairn Building Cooperative” bidoro nchịkọta obodo na-aga nke ọma. Ka oge na-aga, echiche abụọ gbakọtara ọnụ: mkpọmkpọ ebe ma ọ bụ anụ na-aga njem nlegharị anya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ebe ncheta Rieger. Secondlọ nke Czech Tourists Club weghaara ụdị nke abụọ a.
Ntọala nkuku ụlọ ahụ bụ 29. August 1926. E wuru ụlọ ahụ site na ịnakọta, onyinye na onyinye ndị sitere n'obodo ndị dị nso. A malitere 24. June 1928. N'oge Agha Secondwa nke Abụọ ndị agha German na Czechoslovak bi na-ebi ụlọ ahụ. Ka ọnwa Febụwarị 1948 gasịrị, e debere ụlọ ahụ ngwa ngwa wee nyefee ya n'ụlọ oriri na ọ canụ andụ. N'ọnwa Mee nke afọ 1964 ụlọ gbara ọkụ. N'afọ 1994 klọb nke ndị njem nlegharị Czech na Semily zụtara ụlọ obibi na ọnọdụ tọgbọrọ chakoo site na steeti. Na 1995, a na-emeghe ụlọ elu na-ele anya na mita 40 na elu nke nwere usoro ikiri ya na mita 24.
Ulo elu ahu bukwara igwe ndi agha, ndi uwe ojii na ndi oku n’oku. Kemgbe 2002 Kozákov abụwo akụkụ nke Bohemian Paradise PLA. Na 2003, Rieger na-emezigharị ụlọ mgbe emechara nnukwu ụlọ. Lọ elu ahụ na-enye echiche nke Bohemian Paradise, Pojizeří, České středohoří, Giant Mountains na Ugwu Lusatin, Ještěd, ugwu, Podcastkonoší, Broumovská vrchovina, Orlicke hory na ikekwe na foothills nke ugwu Bohemian-Moravian.